wordpress ထဲ Cbox ထည့်မရလို့။ - MYSTERY ZILLION
wordpress ထဲ Cbox ထည့်မရလို့။
June 2008 edited June 2008 in Blog
ကြယ်ဇင်သွေး wrote: »
ကိုကြယ်ဇင်ရေ . . .
ဒီမှာ ကိုစေတန်ရေထားတယ်။ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။:103:
Thank ပါ ဗျာ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ပိန်းတယ်ဗျ။ plugin မလုပ်တက်ဘူးဗျ။:106:
ဒါနဲ့ ဘယ်မှာ wordpress တင်ထားတာလဲဗျ...
wordpress 2.5 မှာဆိုရင်တော့ Text Widget ကလည်း HTML code တွေကို support လုပ်ပါတယ်..
www.wordpress.com မှာပါဗျာ...2.5 လားဘာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျ..:106:
ကျွန်တော်မျိုးကြယ်ဇင်သွေး ( လူပိန်းလေး )ယခုတို်င် wordpress တွင် cbox ထည့်လို့မရသေးပါ။:((
ကျေးဇူးပြုှပြီးကူညီပေးပါဦးဗျာ... :77: wordpress.com တွင်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
mz ရှိလူအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါသည်။ကျွန်တော်ကအခုမှစလေ့လာတုန်းမို့ပါ။ဒီ fourmလုပ်သုူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။သိချင်တာတွေမေးလို့ရတယ်လေ ဟဲ ဟဲ:d
၂.၅ ပါ... Text Widget ရှိတယ်လေ... cbox.ws မှာ register လုပ်... ရတဲ့ HTML code ကို Text widget မှာထည့်ရုံပဲ
ကိုစေတန်ရေ မရဘူးဗျို့:106:ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ကူညီပါဦးဗျာဖြစ်နိုင်ရင်gtalk ပြောချင်ပါတယ်:101:
ဒါဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းပါတယ်လို့ပဲ ပြောရမလားမသိဘူး..
wordpress.com က လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ မရှိဘူး.. သူပေးထားတာလေးပဲ လုပ်လို့ရလို့ပါ...
ကျွန်တော့် mail က saturngod AT mysteryzillion DOT com ပါ